Makà fotoana ary mamorona kaonty Sugarlove1 maimaim-poana izao!
Avereno ny kaody fampandehanana
Ampidiro eto ny adiresy mailaka voasoratra anarana, mba hahafahanay mandefa ny rohy fampandrosana anao.
Adiresy mailaka	*
Torohevitra sy torohevitra 19:
1) Anaram-pikambana momba ny mombamomba anao - mahaiza mamorona
Rehefa mamorona ny mombamomba anao ao amin'ny Sugarlove1 ianao dia hanontaniana ny anaranao. Zava-dehibe ny famoronana sy ny fiavianao amin'ny safidinao anarana. Midika izany fa aza mamorona anarana mpampiasa miaraka amin'ny atiny ara-nofo miaraka amin'ny mombamomba azy sandoka. Voarara avy hatrany izy ireo!
2) Mampiasà sary mombamomba tsara
Misafidiana sary tsara anao. Ho toy ny teboka fanombohana dia tokony hitazomana ny ankizy tsy ho ao amin'ny sarinao ny mombamomba anao. Ny datinao dia afaka mahita mora amin'ny fampahalalana momba ny mombamomba na amin'ny daty iray aza. Ny zava-dehibe amin'ny maro dia ny manome hevitra momba ny fisehoanao ivelany. Ny toetranao no zava-dehibe, fa ny sary mombamomba anao tsara no manintona ny masonao.
Misafidiana sary madio sy tsara kalitao. Ny sary dia tokony tsy ho an-taonany maro, fa asehoy tsara ny fijerinao ankehitriny. Aza misalasala mahazo namana haka sary tsara anao.
3) Manorata lahatsoratra momba ny piraofilina tsara
Zava-dehibe ny fanananao lahatsoratra momba ny piraofilina. Tsy misy mankaleo kokoa noho ny fitsidihana profil iray izay tsy azonao vakina akory.
Rehefa manoratra ny piraofilina profil dia tadidio fa tsy maintsy ho lava izany. Midika izany fa tsy tokony ho fohy na lava loatra. Tsy mora izany fa henoy ny tsapanao. Raha milaza fa lava loatra ny lahatsoratra dia andalohy indray dia alaivo tsara. Azonao atao ihany koa ny mis Surf manodidina kely amin'ny Sugarlove1, ary mahita izay mahasambotra anao avy amin'ny lahatsoratr'ireo mpampiasa hafa. Tsy mandika mazava ho azy.
Ohatra, manandrama mamaritra ny tenanao amin'ny alàlan'ny tantaram-piainana iray. Tantara iray mampiseho fa manana ny fonao amin'ny toerana mety ianao. Mety ho afaka hampahiratra ny masonao amin'ny mpamaky izany.
4) Mamorona galeri-tsary ao amin'ny mombamomba anao
Rehefa mitsidika ny mombamomba an'i Sugarlove1 dia mahafinaritra foana ny mahita sary. Ao amin'ny galerianao dia manana safidy ianao hanampy sary izay mampiseho anao amin'ny toe-javatra maro. Tsy voatery ho ny sary mombamomba azy ao anaty lobaka sy karavato izay manaraka anao na aiza na aiza. Manaova fifangaroana eo amin'ireo toe-javatra napetraka sy sary milamina. Manome anao ny sary feno momba ny maha-olona anao izany.
5) Manaova vazivazy ary manehoa fifaliana, tsara kokoa raha mipipy maso
Rehefa manoratra amin'ny piraofilinao dia manandrama manenona hatsikana ary manehoa hafaliana. Raha azonao atao ny mampiseho fa mihevitra ianao fa mahafinaritra ny Sugarlove1, dia bebe kokoa ny fahafahan'ny olon-kafa tianao.
6) Mahaiza manokana
Miezaha mitokana. Raha misimisy ianao dia ho hitanao ho toy izany koa, ary avy eo ny vintana handavana anao dia lehibe kokoa. Asehoy hoe iza ianao ary alaivo antoka fa azo tsapain-tanana koa izy io.
7) Miezaha hitory sy hivoaka
Rehefa nahavita ny mombamomba anao ianao dia resaka mipetraka fotsiny ary miandry ny tolotra hirosoana, marina? Tsia! Tsy izany no fomba fitendrin'ny piano. Miezaha ho tonga mazoto ary mazotoa, ary raha mahita profil iray mahaliana ianao dia araraoty ilay fotoana ary andramo ny hifandray. Izy ireo no vitsy afaka miandry fotsiny ny hifandraisana. Fa aza mifandray amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny hoe "Hello" ao anaty hafatra. Mankaleo. manorata hafatra manomboka resaka.
8) Mifandraisa ary aza manantena ny hafa handray andraikitra
Rehefa mampiaraka siramamy amin'ny Internet, dia miomàna handray andraikitra. Ireo vitsivitsy no afaka mipetraka ary mamela ny fitiavana ho tonga ho azy. Mifandraisa raha liana aminy ianao. Tsy dia mitranga izany raha mipetraka eo an-tananao ianao na mieritreritra hoe "tsy liana amiko mihitsy izy", ary mety ho marina izany, saingy tsy ho hitanao mihitsy raha tsy manandrana ianao. Ilaina ihany koa ity torohevitra ity amin'ny karazana mampiaraka rehetra - aza matahotra ny handray andraikitra mialoha!
9) Mitondrà tena araka ny tokony ho izy ary manaja
Amin'ireny fotoana ireny raha ny adihevitra momba ny feo tsara - ary koa amin'ny Internet - dia saika miparitaka amin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery rehetra, zava-dehibe ny mahatadidy fa tsy maintsy mifankatia isika. Raha resaka Sugarlove1 an-tserasera dia hevitra tsara fanampiny ny hitondra tena tsara. Matetika ny varavarana tsy masiaka sy tsy milay no manidy varavarana betsaka kokoa noho ny misokatra.
10) Andraso fa haka fanandramana sy fotoana maromaro ianao hahitana ilay mety
Ny fahitana ny tsara amin'ny andrana voalohany rehefa mampiaraka amin'ny Internet ianao dia ankanavaka kokoa noho ny fitsipika. Mitranga izany, mazava ho azy, saingy angamba tokony antenainao ny haka daty andrana sy hafa mba hahitanao ny mety aminao.
11) Aza avela ny fanariana manala ny faniriana mitady lavitra kokoa amin'ny daty
Raha lavina ianao - na dia efa mampiaraka aza ianao, dia aza kivy na maniry mafy. Mandrosoa ary mifalia amin'izany. Avo lenta ny vintana hahombiazana, satria tsy mbola nisy olona maro mampiasa daty siramamy an-tserasera noho ny ankehitriny. Mihatra amin'ny tanora sy ny lehibe izany. Ny ampaham-potoana 60+ dia mampiasa mampiaraka siramamy an-tserasera ihany koa mba hahitana namana sy sakaiza vaovao. Ka farany dia aza horobaina amin'ny faniriana hampiaraka amin'ny Internet noho ny fandavana adalana. Izy io dia ampahany voajanahary amin'ny fiainana izay alaina tsara amin'ny handrina mahitsy.
12) Soraty izay tadiavinao
Rehefa manoratra ny lahatsoratrao ho an'ny mombamomba anao Sugarlove1 dia soraty izay tena tadiavinao. Manome fotoana hafa tsara kokoa ho an'ny hafa izany mba hahazoany fahatsapana momba anao sy izay antenainao hitranga. Aza adino koa fa izao no fiheverana voalohany ny toetranao, ka jereo indray mandeha raha toa ka mifanaraka ny lahatsoratra sy ny toetranao.
Ataovy ao an-tsaina ihany koa fa raha be loatra ny zavatra takiana aminao, dia mety hampatahotra ny mpiara-miasa aminao koa izy io. Tsy misy olona tonga lafatra.
13) Miaraha manoratra alohan'ny daty voalohany
Torohevitra tena tsara dia ny manoratra miaraka alohan'ny andehananao mampiaraka. Amin'izany no hahalalanao faingana raha misy karazana simia ary ny simia manoratra dia toerana tsara hanombohana. Mikaroha bebe kokoa momba ny tsirairay ary jereo raha mifanaraka kely fotsiny ianao. Rehefa tafapetraka amin'ny toerany izany dia azonao atao ny mandamina daty voalohany. Tsara matetika ny mitazona izany tsy ara-potoana amin'ny toerana voalohany - ohatra amin'ny kafe iray kapoaka. Ity dia fomba mahazatra hihaonana sy hifankahalalana.
14) Aoka ianao ho tso-po ary maneho fahalianana
Rehefa miresaka amin'ireo kandidà hitanao fa mahaliana sy mahaliana, dia ataovy izay tso-po ary asehoy ny fahaliananao amin'ilay olona anoratanao. Asehoy fa tianao ilay olona, ​​saingy tsy dia hoe lasa toy ny stalker izy. Fiovana lehibe amin'ny.
15) Mijoroa amin'ny toetranao sy ny hevitrao
Mampiseho izany fa manana hazondamosina sy tsy fivadihana ianao. Tsy maintsy sahy mijoro amin'izy ireo koa ianao rehefa tsy manaiky ny hafa. Aza adino anefa ny mitazona ny tonony tsara rehefa manoratra. Tadidio fa tsy ao anatin'izany ianao raha hiady hevitra amin'ny politika.
16) Manaova ny marina
Tokony hanao ahoana ny fahamarinan'ny olona iray rehefa mampiasa Sugarlove1? Fanontaniana tsara foana izany ary maro ny fomba fiasa momba azy. Fa raha mandainga aminy tokoa ianao, iza no mety ho "tokana" anao, dia mety hanjary ho olana io avy eo.
17) Mahaiza mamorona fa tsy tantaram-pitiavana (mbola hisy fotoana amin'izany)
Ao amin'ny Sugarlove1, manome valisoa ny famoronana. Matetika ianao no tsy maintsy mandresy lahatra amin'ny alàlan'ny teny na sary fa tsy ho tantaram-pitiavana. Noho izany, tokony avelanao ny fahaizanao mamorona sy ny hevitrao handresy ny faniriana ho tantaram-pitiavana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny dingana. Ampiasao ny angovo hamoronana profil tsara, mahaliana ary mafy orina.
18) Manaiky fandavana
Rehefa misy mamaly fa tsy natao ho azy ireo ianao dia ekeo izany. Eny, mety hahatsapa ho mandreraka, fa izany no nilalao azy. Na an-tserasera izany na amin'ny tena fiainana dia mila manantena ianao fa tsy ny rehetra no hieritreritra hoe tsara ianao. Ny "lalao Sugarlove1" dia momba ny fitadiavana ilay mihevitra anao ho somary mahavariana kokoa noho ny olon-drehetra, nefa averinao ny sainao. Rehefa mifankahita toy izao ianao dia nandresy ny "lalao".
19) Aza raisina manokana raha tsy voavaly ny taratasinao. Mety misy antony 100
Ny zavatra voalohany tokony hataonao rehefa manomboka mitady ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny Sugarlove1 ianao dia mandefa hafatra ary mifandray amin'ilay iray hitanao fa mahaliana. Avy eo dia tonga ny fiandrasana, izay hiandrasanao valiny fotsiny. Ahoana anefa raha tsy tonga mihitsy izany? Ny tendrony Sugarlove1 tsara indrindra dia ny: Aza tezitra. Tsy maintsy sorohinao ny fitondranao azy. Raha manao izany ianao, Sugarlove1 dia mety ho traikefa mankaleo ho anao. Mety misy antony maro tsy famaliana. Ohatra, mety efa nahita ny lalao nifanaovany izy, saingy mbola tsy nanidy ny mombamomba azy.
Mamorona androany ny piraofilinao
Aorian'ny famakiana ity torolàlana ity dia tokony ho vonona amin'ny fahombiazana ianao ao amin'ny Sugarlove1. Fa raha mbola tsy namorona ny mombamomba anao ianao dia tsy hanampy anao hahita ilay tadiavinao ireo torohevitra sy torohevitra ireo.
Sugarlove1 no tranokala fampiroboroboana siramamy haingana indrindra any Danemark. Niara-nitondra siramamy an'arivony izahay, ary tena afaka manampy anao koa. Noho izany, miharihary ny dingana manaraka: Mamorà profil ao amin'ny Sugarlove1 anio, mba hahafahanao mametraka ny torohevitray amin'ny fitsapana, ary hahitanao ny fahafinaretana sy ny fahafahany raha vao nivoaka avy tao anaty akorandriaka ianao.
Raha mbola manana fanontaniana ianao, dia vonona hanampy anao amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka ny mpiasan'ny mpanjifa tsara any Danemark. Ho hitanao eto ireo fampahalalana momba ny fifandraisana sy ora fisokafana: Serivisy ho an'ny mpanjifa
Ora fanokafana: Misokatra 24 ora
Phone: (+ 45) 29 80 13 19